FLV ka iPad 3: tọghata FLV ka The New iPad (iPad 3)
> Resource> iPad> Olee otú iji tọghata FLV ka The New iPad (iPad 3)
FLV bụ a nkịtị video format eji napụta video n'elu internet. N'ihi ya, ọ bụ ihe ọ bụla nsogbu na-FLV videos online na-anakọta ha na kọmputa gị yikarịrị. Ọ bụrụ na ị chọrọ igwu gị FLV collections na ọhụrụ iPad 3, ị ga-abịa gafee ihe kedi nke. Nke ahụ bụ eziokwu na FLV bụ dakọtara na iPad 3. One ngwọta bụ iji tọghata FLV ka iPad 3 n'ihi na playback.
Na-atụgharị videos si FLV format n'ime ihe iPad 3 na-akwado usoro, i nwere ike iji oké video Ntụgharị-enyere gị aka ịrụ akakabarede. Ke ibuotikọ emi, Aga m ịme dị otú ahụ a smart ngwá ọrụ maka Mac na Windows n'elu ikpo okwu ọ bụla. Ma nwere ike inye gị ikike iji tọghata FLV ọ bụla ọzọ na-ewu ewu video format, nakwa dị ka awade gị kachasị usoro maka iPad 3 ka mfe ime na onye ọ bụla n'elu ikpo okwu. N'ihi na Mac ọrụ, ị nwere ike ibudata Video Ntụgharị maka Mac, mgbe Video Ntụgharị maka Win bụ maka Windows na-azụ.
Ọzọ, Aga m na-Windows version ihe atụ kọwaa FLV ka iPad 3 akakabarede nzọụkwụ site nzọụkwụ.
Nzọụkwụ 1: Ibu Ibu FLV videos ka FLV ka iPad 3 video Ntụgharị
Site na isi menu, ị nwere ike pịa "Tinye Files" button na-agagharị na mbubata FLV faịlụ ka usoro ihe omume. Ọ bụrụ na gị FLV faịlụ ndị na aka, a mfe ụzọ mbubata FLV faịlụ bụ kpọmkwem ịdọrọ na dobe lekwasịrị faịlụ ka ngwa a.
Nzọụkwụ 2: hazie mmepụta ntọala
Iji họrọ kachasị preset maka iPad 3, ị nwere ike pịa Ọkpụkpọ na akara ngosi na "mmepụta Format" ebi ndụ, na-emeghe adaala format ndepụta, na mgbe ahụ na-aga "Ngwaọrụ"> "Apple"> "iPad".
Anyị maara iPad 3 tumadi na-akwado MP4 usoro. Ọ bụrụ na ị chọrọ họrọ MP4 dị ka mmepụta format, ị nwekwara ike họrọ MP4 ke "usoro"> "Video" udi. Ọzọkwa, kpebie Encoder, mkpebi, ụba ọnụego na Bit ọnụego wdg na "Mwube" window, dị ka iPad 3 si tech ụdịdị (lee mmasị ndepụta).
Nzọụkwụ 3: Malite iji tọghata FLV ka iPad 3
Kụrụ "tọghata" na-amalite converting gị FLV faịlụ ka ọhụrụ iPad 3. Mgbe akakabarede a mere a nkeji ole na ole mgbe e mesịrị, bụ onye "Open nchekwa" nhọrọ ga-gosiri na n'ihu gị. Dị nnọọ pịa ya na-emeghe na nchekwa ma chọta mmepụta faịlụ n'ebe ahụ. Ugbu a, ị pụrụ itinye mmepụta faịlụ na iPad 3 na-enweghị nsogbu ọ bụla. Dị nnọọ mbubata ha ka ha iTunes na mgbe ahụ mmekọrịta ha gị iPad 3. Nke ahụ bụ niile.
Cheta na: Nke a Video Ntụgharị nwekwara na-enye gị ụfọdụ dị ike edezi ọrụ, dị ka na-agbakwunye mmetụta, watermark, na ndepụta okwu wdg Ọ bụrụ na mkpa, ị nwere ike idezi FLV faịlụ n'ihu akakabarede.
iPad 3 si tech ụdịdị maka video: